ESI MEE KA NGHỌTA DỊ NA CORELDRAW - ESI MEE - 2019
Ihe ọmụmụ: anyị na-eme nghọta na CorelDraw
Ọtụtụ ndị football Fans na-ahọrọ ile football site na iji Intanet. A na-ejikarị usoro a eme ihe dị ka onye a manyere mmanye, ebe ọ bụ na ọ na-arụsi ọrụ ike ma na-adịchaghị mma karịa mgbasaozi TV.
Otú ọ dị, e nwere nkà na ụzụ nke ị nwere ike ịlele egwuregwu nke egwuregwu na oke àgwà n'ejighị oge na akwara. Aha ya bụ Sopcast, na n'isiokwu a, anyị ga-akọwa otú ị ga-esi na-ekiri mgbasa ozi egwuregwu, gụnyere football, ya.
Download nsụgharị Sopcast kacha ọhụrụ
Gụọ na saịtị anyị: Otu esi eji Sopcast
Otu esi egwu Sopcast
1. Nke mbụ, ịkwesịrị ibudata na wụnye ọkpụkpọ mgbasa ozi Sopcast, nke na-enye gị ohere ịbanye na ọwa mgbasa ozi ma gosipụta ya na elu mma.
2. Mgbe nke ahụ gasịrị, ịchọrọ ịchọta njikọ pụrụ iche na mgbasa ozi na Sopkast.
Njikọ a na-akpọkarị "sopka".
Mepee ihe nchọgharị Ịntanetị nke ị na-ejikarị eme ihe, yana site n'enyemaka nke engines na-achọpụta ebe a na-ekpughe mgbasa ozi n'ịntanetị nke duels. Pịa na chọrọ egwuregwu.
3. Tupu ị mepee mgbasa ozi ahụ, dị maka ihe nchọgharị ma ọ bụ egwuregwu dị iche. Anyị nwere mmasị na egwuregwu, anakọtara n'ime ìgwè «Sopcast». Maka mgbasa ozi ọ bụla, a na-egosipụta asụsụ nke ndị nkọwa, àgwà oyiyi na usoro. Ọ bụrụ na ọsọ nke njikọ Ịntanetị na-enye ohere, họrọ mgbasa ozi na ọnụego dị elu karị.
4. Dabere na saịtị ahụ, pịa "Lee" ma ọ bụ bọtịnụ ọzọ iji gaa na mgbasa ozi. The sopkast ga-emeghe na akpaghị aka ma budata njikọ (otu "sopka"). Ịkwesighi ịbanye ihe ọ bụla na "Nbanye" na "Paswọdu" ubi.
N'ebe ụfọdụ, a ga-agwa gị ka ị mepee njikọ njikọ na Sopkast. Pịa ya ma lelee mgbasa ozi.
5. Mgbe oge ụfọdụ gasịrị (ruo na nkeji) egwuregwu ga-apụta na ihuenyo ọkpụkpọ. Iji tinye ihuenyo zuru ezu, pịa akara ngosi dị na ala nke ihuenyo, dị ka egosiri na nseta ihuenyo.
Ọ bụrụ na mgbasa ozi na-enye njehie, chọọ naanị njikọ ndị ọzọ. Ọ bụrụ na agbasa ozi ọma ahịrị, kwụsị ya ma malitegharịa site na ịpị bọtịnụ mkpọtụ / Play.
Ya mere, anyị lere anya ile anya na ịgba chaa chaa na mma na-eji Intanet na usoro Sopcast. Nwee egwuregwu nke ìgwè ndị kachasị amasị gị!